Ma ka khafiifsan tahay iPhone-ka? | Martech Zone
Khamiista, Sebtember 13, 2007 Khamiis, Juun 11, 2015 Douglas Karr
3d sawir taleefanka gacanta oo leh shaashad jilicsan oo ku go'doonsan caddaanka
Teknoolojiyadda ayaa wali ku socota si xowli ah, mararka qaarna cabsi gelinaysa. Way adag tahay in la aqoonsado sida tani wax uga beddelayso qaab nololeedkeenna mustaqbalka. Fiiri fiidiyowgaan on dabacsan OLED bandhigyo:
Qiyaas inaad telefishanka ku daawato shaarkaaga, ama laga yaabo inaad ku aragto xayeysiis dusha alaabada wax iibsaneysa… ama xitaa fiidiyoow ku jira sheyga laftiisa. Ka waran sida loo daawado fiidiyowga shaashad la tuuri karo oo la socota qalabka xiga ee aad iibsato (haddii uusan horay ugu lahayn wax bandhig ah!). Maskax-wareer!
Waxaan dhowaan u iibsaday kaar microSD 2Gb ah Razrkeyga waana qiyaastii dime. Si aan ugu fikiro inaan ku keydin karo fiidiyow dhererkiisu dhan yahay cufan cabbirkan ah, oo aan ku soo bandhigo shaashad ku habboon kara muraayadaha indhaha… Wow!
Koofiyad Koofiyad Mustaqbalkeena Farsamada halkaan ka helay video-ga.
Tags: dhoobo jilicsanSony
Sep 14, 2007 at 2: 27 AM
Haa, waxaan ku hormarnay tikniyoolajiyadan Boqortooyada Midowday (ma ahan aniga shaqsiyan). Waxaa jiray hadal ah in laga sameeyo waraaqda waraaqda si aad ugu badasho midabka qolkaaga ama qaabka aad rabto. Ama dabcan daawo rinjiga qalalan (fiidiyowga rinjiga qalajinaya runti).
Sep 14, 2007 at 10: 17 AM
Cajiib. Taasi waxay umuuqataa mid cajiib ah! Anigu waxaan ahay nuugista dhabta ah ee qalabka iyo waxaas runti waxay qabteen xiisahayga. Qiyaas inaad awoodo inaad isku laabto TV-gaaga oo aad gasho jeebkaaga dambe? Sidee ayey u fiicnaan laheyd taasi? 😉
Sep 14, 2007 at 2: 02 PM
Waxaan u wada ahay isku imaatin, ha iga qaldan laakiin laakiin… Waxaan u baahanahay hanti ma guurto ah waxyaalahan. Si kale haddii loo dhigo, wax kasta oo ka yar Iphone-ka la soo sheegay, iyo soo-jeedinta waxaa laga dhigayaa kuwo aan waxtar lahayn.